बाहुबलीमा कसको पारिश्रमिक कति ?::जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
बाहुबलीमा कसको पारिश्रमिक कति ?
अहिले ‘बाहुबली–२’ले फिल्म हलमा धुम मच्चाइरहेको छ । अघिल्लो बाहुबलीभन्दा सिक्वेल बाहुबलीले धेरै माथिको व्यापार गरिरहेको छ । एसएस राजामौली निर्देशित तेलेगु फिल्म बाहुबलीका प्रमुख कलाकारले कति पारिश्रमिक पाए होलान् भन्नेबारे आमदर्शकमा कुतुहलता छ ।
बाहुबलीका लागि प्रमुख कलाकारले झन्डै पाँच वर्ष खर्चिएका छन् । हिरो प्रभासले त अरू सबै काम छाडेर बाहुबलीका लागि बन्धकझैँ जीवन बिताउनुपर्यो । भारतीय अनलाइनले उल्लेख गरेअनुसार बाहुबलीका कलाकारले पाएको पारिश्रमिक:
प्रभासले अमरेश र महेन्द्र बाहुबली गरी दोेहोरो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । बाहुबलीका दुवै भागका प्रमुख पात्र नै प्रभास हुन् । बाहुबलीमा अनुबन्धित भएपछि प्रभासले कुनै फिल्म तथा विज्ञापन साइन गरेनन् । झनडै पाँच वर्ष उनले बाहुबलीलाई दिए । जसबापत उनले २५ करोड भारु पारिश्रमिक पाए । पाएको काम अत्यन्तै धैर्यता र लगावका साथ गर्नाको फल उनले पाइरहेका छन् ।
कटप्पाको भूमिका निर्वाह गरेर चर्चा कमाएका अभिनेता सत्यराजले बाहुबलीमा अभिनय गरेबापत दुई करोड भारु पारिश्रमिक पाए । फिल्ममा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका कटप्पा दरबारका बफादार कर्मचारी हुन्छन् । बीचमा भिलेन देखाइएका कटप्पालाई फिल्मको अन्त्यमा हिरोकै रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
दक्षिण भारतकी चर्चित अभिनेत्री राम्या कृष्णनले बाहुबलीमा शिवागामीको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । फिल्ममा बाहुबलीलाई पालेर छोराको दर्जा दिएकी शिवागामी बाहुबलीको पहिलो भागमा निकै छोटो भूमिका थिइन् । अहिले दोस्रो भागमा उनी अहम् भूमिकामा छिन् । उनले साढे दुई करोड भारु पाइन् ।
दक्षिण भारतीय फिल्मकी चर्चित हिरोइन अनुष्का सेठ्ठी बाहुबली–२ मा बाहुबलीकी पत्नी देवसेना र महेन्द्र बाहुबलीकी आमाको भूमिकामा छिन् । उनले फिल्ममा अभिनय गरेबापत पाँच करोड भारु लिएको बताइन्छ ।
तमन्ना भाटिएकाले महेन्द्र बाहुबलीकी प्रेमीका अवन्तीको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । पहिलो बाहुबलीमा तमन्नाको भूमिका लामो थियो । तर, दोस्रोमा छोटो छ । उनले पनि अनुष्काको जत्ति नै अर्थात् पाँच करोड भारु पारिश्रमिक पाएको अनलाइनहरूको दाबी छ ।
बाहुबलीका मुख्य भिलेन भल्लालदेवको भूमिका निर्वाह गरेका राणा दग्गुवातीलाई फिल्ममा शक्तिशाली पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । बाहुबलीलाई टक्कर दिने भल्लालदेवले १५ करोड भारु पारिश्रमिक पाएको बताइन्छ ।
मङ्लबार, साउन १७, २०७४
नम्बर १ ट्रेन्डीङमा भद्रगोल
सन्निलाई यसरी आपत्तिजनक अवस्थामा समाते आफ्नै बाबुले